Waa maxay maalgelinta federaaliga ah ee dib loo soo celiyay waxay uga dhigan tahay barnaamijyada Cunnooyinka Shaagagga ee maxaliga ah - Cunnooyinka Shaagagga
Maxaa dib u soo celiyay maalgelinta federaalka macnaheedu waa barnaamijyada Cuntada ee Wheels-ka maxalliga ah
Cunnooyinka barnaamijyada 'Wheels on Wheels' ee waddanka oo dhan ayaa war wanaagsan ka helay Washington, DC, dhawaan markii Koongarasku la ansixiyay taageerada labada xisbi biil soo celinaya maalgalinta federaalka ee cuntada guriga la geeyo. Hindise sharciyeedka ayaa dib u soo celinaya maalgalinta federaalka heerkii uu ahaa ka hor intaan la jarin guddiyada guddiga oo dhan qabtay bishii Maarso ee 2013.
Marka maxay tani uga dhigan tahay barnaamijyada Cuntada ee Wheels-ka maxalliga ah? Waxay u keeneysaa gargaar fara ku tiris ah barnaamijyada xubnaha ee Meals on Wheels ee degmada Hennepin kuwaas oo qayb ahaan ku tiirsan barnaamijka federaalka, ugu yaraan si hordhac ah. Hay'ad goboleed ayaa ugu dambeyn go'aamisa sida lacagta looga helo sharciga federaalka Older Americans loo qoondeeyo waana calaamad fiican in ay jiri doonaan lacag badan oo loogu talagalay cuntada guryaha lagu geeyo. Dhowr barnaamij oo ku saabsan Cunnooyinka Gawaarida ayaa ka dhammaaday maalgalinta federaalka dhammaadkii 2013.
"Barnaamijyadeena Cunnada ee Wheels oo ku tiirsan maalgelinta federaalka si loo leexiyo kharashka cunnada loo geeyo dadka ugu baahan, tani waa tallaabo weyn oo loo qaaday dhinaca saxda ah," ayuu yiri Metro Meals on Wheels Executive Director Patrick Rowan. “Waxaan ku faraxsanahay in Koongarasku aqoonsaday muhiimadda ay leedahay adeegyada ka caawiya dadka waayeelka ah inay si madax-bannaan ugu noolaadaan guriga waxaanan ku rajo weynahay in maal-gashigani sii socdo. Waxaan jeclaan lahayn inaan u mahad celino xubnaha waftigayaga maxaliga ah, oo ay ka mid yihiin Sen. Al Franken iyo Rep. Betty McCollum, oo aad uga shaqeeyay sidii loo soo celin lahaa maalgalintan. ”
Sharcigan ayaa ansixinaya maalgalinta illaa Sebtember 2014, markaasoo mar labaad maalgelin loogu talagalay cunnooyinka guryaha la keeno, iyo miisaaniyadda federaalka guud ahaan, laga doodi doono. In kasta oo soo celinta maaliyaddu ay tahay war soo dhaweyn ah, barnaamijyada Meals on Wheels ee maxalliga ah ee ku tiirsan waxay wali la kulmi doonaan caqabado xagga u adeegidda waayeelka kuwa ugu baahan caawimaadda maaliyadeed.
"Aad ayaan ugu faraxsanahay in dib loo soo celiyo maalgalinta, laakiin waxaa muhiim ah in la ogaado in maalgalinta dowlada dhexe ee cunnooyinka guryaha lagu keeno ay sideedii taagneyd 12 sano halka dadka waaweyni ay sii kordhayaan," ayuu yiri Rowan.
Wixii macluumaad dheeraad ah, waad akhrin kartaa tan bayaan ka soo baxay Ururka Cunnada ee Ururka Wagagga Mareykanka.